Erdogan oo ka hadlay xayiraadda rabshadaha leh ee Yuhuuddu saartay al-Qudus | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka July 23, 2017	0 208 Views
Qudus, Falastiin (Himilonews) – Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa ka hadlay xiisad maalmihii lasoo dhaafay ka taagneed magaalada Qudus gaar ahaan Masjidka Barakeysan ee al-Aqsaa oo bannaankiisa ka dhaceen rabshado dad lagu dilay.
Erdogan ayaa ku eedeeyay maamulka Isra’il in ay xadgudbeen sidoo kale adeegsadeen awood xad dhaaf ah, kadib isku dhicii banaanka Masjidka ku dhax maray Dad Falastiiniyiin ah iyo ciidamo ka tirsan Maamulka Isra’il.
Madaxweynaha Turkiga ayaa uga digay Maamulka Isra’il ee xooga ku heesta dhulka Falastiin in ay awood adeegsadaan ayna waxyeelo gaarsiiyaan dadka Falastiiniyiinta ah ee dhigaya banaan baxyada ka dhanka ah Israil.
Rabshado dad ku dhinteen ayaa ka dhacay labadii Jimco ee lasoo dhaafay banaanka Masjidka Barakeysan ee Al Aqsaa ee kuyaala magaalada Qudus, rabshadahan ayaana bilowday kadib markii rag hubeesan toogteen labo askari oo Yahuud ah.
Israa’il ayaa u diiday Masjidka Al Aqsaa in ay ku dukadaan dadka da’dooda ay ka yartahay 50-sano, waxaana arintaasi keentay rabshado iyo isku dhac keentay in Ciidamada Yahuuda toogtaan dhalinyaro Falastiiniyiin ah.
Inta badan Hogaamiyaasha Wadamada Islaamka ayaan ka hadlin xiisada ka taagan magaalada Qudus iyo dhibaatada lagu hayo dadka Falastiiniyiin, Madaxweyne Erdogan ayaana noqday Hogaamiye qarsan waayay caradiisa kana hadlay dhibka isra’il ku heyso dadka reer Falastiin.
Next: Waa sidee Wax-barashada Dugsiga Indhoolayaasha al-Nuur.